सीतासँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
सीतासँग विवाह गर्नेलाई दुई करोड
प्रकाशित मिति २६ फाल्गुन २०७५, आईतवार ११:०० लेखक नेपाली जनता
काठमाडौं । विश्वमा विभिन्न घटनाले समय–समय चर्चा बटुलिरहेका हुन्छन् । हरेक क्षेत्रसँग सम्बन्धित घटना मिडियाका नजिक पुग्छन् र एकै सेकेन्डमा धेरै देशमा यसको प्रवाह भइसकेको हुन्छ । इन्टरनेटको पहुँचका कारण अहिले विश्व सानो भएको छ ।
आज हामीले यहाँ चर्चा गर्न खोजेको बिषय थाइल्याण्डका एक करोडपति बुवाले आफ्नी छोरीसँग बिवाह गर्नेलाई २ करोड रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् । यो फैसला छोरीको बिवाह लामो समयसम्म नभएकाले गरिएको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमले बताएका छन् । छोरीको समस्याका बिषयमा कुने कुरा उल्लेख गरिएको छैन ।
करोडपति अर्नोन रोडथोंगकी छोरी कार्नसिता २६ वर्षकी भइन् । उनले स्नातक सम्मको पढाइ सकेकी छन् । उनी सबै बिषयमा अब्बल रहेको बताइएको छ । ती किशोरीसँग बिवाह गर्ने केटामा ३ गुण हुनुपर्नेछ । केटा स्मार्ट हुन जरुरी छैन, पढ्न र लेख्न आउनुपर्छ । दोस्रो कडा मेहनती हुनुपर्नेछ र तेस्रो पैसाका निम्ति कन्जुस होस र आफूलाई माया गरोस् । किशोरीका पिताका अनुसार बिवाहपछि कार्नसिताले बुवाको व्यापार सम्हाल्नेछिन् ।
ट्रायल पास गरेकाको पनि लाइसेन्स रद्द !
काठमाडाैं । सरकारले जारी गरेको यातायात व्यवस्था कार्यविधिअनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा ट्रायल पास गरेका तर राजश्व नतिरेकाको सबै…
नेपाली सेनाको छवि अपारदर्शी बन्दै
काठमाडौं । पछिल्लो समय नेपाली सेनाको छवि अपारदर्शी बन्दै गएको छ। त्यसैले सेनाको आचरण सुधार्न सैनिक मुख्यालयले अभियान सुरु…
अर्को वर्षदेखि नेपालको बिजुली बचतमा, सन् २०१९ को वर्षादेखि बिजुली बेच्नुपर्ने, तर हिउँदमा किन्नैपर्ने !
काठमाडौं । आगामी वर्षदेखि नेपालमा वर्षात्को समय (वेट सिजन)मा विद्युत् बचत हुने…
एमाले र माओवादी केन्द्र विघटनपछि बन्ने कम्युनिस्ट पार्टी ४४१ सदस्यीय, चुनाव चिन्ह सूर्य
काठमाडौँ । एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकीकरण भएपछि बन्ने नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कमिटी ४४१ सदस्यीय हुने दूई पार्टीका…
धमाधम चोख्खिँदै गुन्डा नाइकेहरु, पर्शुराम बस्नेतले पनि चार वर्षपछि सफाई पाए
काठमाडौं । गुन्डा नाइके पर्शुराम बस्नेतले चार वर्षपछि सम्पति शुद्धिकरणको मुद्दामा…
काठमाडाैं । इन्डोनेसियाको लायन एयरको बोइङ ७३७ यात्रुबाहक बिमान सोमबार बिहान उडेलगत्तै दुर्घटनाग्रस्त भएको छ । उक्त जहाजमा चालक…